Home Wararka Qoor Qoor iyo lixdii qof uu magacaabay oo kulmay & Beeca codka...
Qoor Qoor iyo lixdii qof uu magacaabay oo kulmay & Beeca codka oo caawa cirka isku shareeray
Waxa laba saac ka hor soo dhamaaday kulan u dhaxeeyay MW Qoor Qoor iyo lixdii qofood ee uu soo magacaabay isaga oo kala hadaly isbadal ku yimid qaabka doorashada ee Sanadka, ka dib markii baarlamanka Galmudig uu sharci cusub ku xiray doorashada Aqalka Sare.
Qoor Qoor ayaa u sheegay musharaxiinta senatorka la soo magacaabay in ay deg deg ku keenaan lacag lagu sheegay in ay gaarayso labo milyan oo loo qaybiyo xildhibanada si loo ansaxiyo liiska Senators. Qoor Qoor ayaa markii hore ku fakaray in xildhibaanada loo qeybiyo lacag gaareysa $2,000 qofkiiba laakiin taas waxa ka hor yimid xildhibaanda iyaga oo codsaday in musharaxiiba laga bixiyo ugu yaraan $10,000.
Dhanka kale qaar kamida musharaxiinta uu liiskooda soo gudbiyay ayaa ku eedeeyay Qoor Qoor in uu isagu dabaro ama bixiyo lacagaha la siinayo xildhibanada madaama uu isaga horay uga qatay lacago badana dhamaan musharxaiinta uu xalay liiskooda soo gudbiyay.
Xaalada Galmudug ayaa caawa kacsan iyada oo aan la ogaynin waxa laga filan karo kulan berito loogu codeeynayo xildhibaanada.